Aw Daahir Aweys oo ku Biiray Al Shabaab, Diidana in uu Cadaysto – Rasaasa News
Aw Daahir Aweys oo ku Biiray Al Shabaab, Diidana in uu Cadaysto
Ururka Alshabaab ayaa waxay soo saareen warsaxaafadeed ay ku sheegeen in ay la midoobeen ururka kale ee Raskambo isla mar ahaantaana ay la midoobeen ururka argagixisada ah ee Al Qaciida.
Iyada oo ay awal hore ahayd xan xan ayey maanta cadaysteen ururada Somaliya ka dagaalamaa in ay yihiin argagixiso aan u dagaalamaynin sharafta iyo nabadaynta dalka Somaliya. La midowga ururka Al Qaacida ayaad moodaa in lagu qasbay ururka Al Shabaab oo in badan is qarinayey, maadaama dhaqaalaha ay dagaalka ku wadaan uu bixiyo ururka Al Qaacida, waxaa haatan lagu khasbay in ay lumiyaan gabi ahaanba taageerada Somalida.
Hadaba, waxaad moodaa in masuuliyiintii ururada Islamiga ah ee ka dagaalamayey Somaliya oo awal hore taageero ka heli jiray dadweyne badan oo Somali ah in ay maanta lumiyeen, kolba hadii ay is cadeeyeen in ay Al qaacida yihiin. Waxaad moodaan in ururka Alshabaab uu u gacan haadinayo in ay soo galan dalka Somaliya ciidamo shisheeye oo ay ugu horayso ciidamada Itobiya iyo Kenya iyo Jabuuti si ay uga hortagaan masiibo weyn oo ku soo food leh dalalkooda.
Masuuliyiinta ururada Islaamiga ah ee ka dagaalama dalka Somaliya ayaa u muuqda in kuligood ay la shaqeeyaan ururka aduunka laga neceb yahay ee Al qaacida. Waxaadna moodaa in markii hore ay islahaayeen waxaa idinka didi dadka Somaliyeed, haatanse arkay in ay gacanta ku dhigeen inta badan dalka Somaliya marka laga reebo labo gabal oo iyagu samaystay maamulo gooni ah.
Daahir Aweys oo isagu ahaa ninka abla ableeyey ururada argagixisada ah ee ka dagaalama Somaliya, ahna nin midabo badan, ayaa isagu masuul ka ah dhamaan ururada Islamiyiinta ah ee ka dagaalama Somaliya. Daahir Aweys oo aan isagu ka qayb galin ururadii baaqa ka soo saaray Baydhabo ayaa saaka shir jaraa,id oo uu ugu hambalyeynayo ku qabtay magaalada Muqdisho, isaga oo yidhi “ururada Islaamiyiinta ah oo dhan waa in ay midoobaan, waanan ku faraxsanahay go,aankii Baydhabo.”
Axmed Sheekh Islaan [Madoobe], oo ah ka mid ah raga ugu furfuran wadaada Somaliya, kana tirsan ururka xisbul Islam ee uu madaxda ka yahay Daahir Aweys, ayaa shalay beeniyey sheegashada Al shabaa ee ah in ay la midoobeen ururka Raskambooni oo uu madax ka ahaa Axmed Madoobe xiliyadii ina dhaafay, urukaas oo hoostaga ururka Xisbul Islam, ee Aweys madaxda ka yahay.
Is burinta Axmed Madoobe iyo Daahir Aweys ayaa muujinaysay in awal horeba uuna Daahir Aweys daacad ka ahayn in Xisbul Islaam uu ka mowqif duwan yahay Al shabaab. Dadweynaha Somalida ayaa hada iyo wixii ka dambeeya qaadan mawqifka ah “Qori iyo Qiiqiis waa la isla tuuraa”, oo ah in wadaada Somaliya badankoodu u shaqeeyaan Al Qaacida, waxaana daliil u ah ummada Somaliyeed dhaqaalaheeda dhan waxaa uu gacanta ugu jiraa wadaado, meel ay wax ka soo galaana lama yaqaan, wadaad ayaana dadka Somaliyeed ugu shaqo yar.
Alshabaab dhaqaalaha ugu badan, waxaa uu u soo maraa dalka Eritrea, waxaana gudbinteeda masuul uga ah ninka lagu magacaabo Jwxo-shiil, oo hore madax uga ahaan jiray ururka ONLF, eeggase u dhaxeeya Eritrea iyo ururka Al shabaab.
Waa Kuma Ninkan ay ka Muuqadaan Astaamihii CWXO? iyo Arimo Xasasi ah oo ka Taagan Bariga Afrika.
Indigenous Afar People Fight Ethnic Cleansing By Ruthless Eritrea Military Junta